DAAWO: Maamulka P.land oo Dekedda Bosaso si rasmi ah u wareejiyey (Video) | Kalshaale
DAAWO: Maamulka P.land oo Dekedda Bosaso si rasmi ah u wareejiyey (Video)
Oct 12, 2017 - 50 Aragtiyood
Boosaaso (Kalshaale) Munaasabad lagu wareejinayo Dekeda Boosaaso ayaa maanta ka dhacday gudaha Dekedda, iyadoo si rasmi ah loogu wareejiyay Dekedda Shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo P&O.
Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland, Saraakiil ka socotay Shirkadda Imaaraadka Caraabta, Nabadoono iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galay munaasabadda,
Heshiiska Dekeda Boosaaso loogu wareejinayo Shirkadda P&O ayaa dhigaya in muddo sodon sano ay shirkadda ku sameyso Dekeda dayactir iyo ballaaran, iyadoo la dhisayo deked cusub oo dhirirkeedu yahay 450M, Qiimaha ku baxaya dhismaha iyo dib u habeynta Dekeda Boosaaso ayaa gaaraya lacag dhan 336 milyan oo dollar.
Dekeda Boosaaso ayaa noqoneysa dekedii labaad oo ay la wareegto shirkad laga leeyahay Imaaraadka, waxaana Horay Shirkadda DP World ay la wareegtay dekadda Berbera, waxaana la sheegay inuu isku Hal Nin Xukumo P&O iyo DP Wold, Balse waxaa la sheegay in P&O ay inta badan maamushu Dawladda Imaraadku, Halka ta kale ay Dad gaar ah u badan tahay.
XITAA CARABTII BAA NOOSOO BOOB TAGTAY,!!!!!.
LKN CARABTANI WAA XAASASKII MARAYKANKOO WAXAY BOOS CELIN USII YIHIIIN ODAYGII QABAY EE MARAYKAN AHAA SI AAN MEESHA RAASHIYA LOO KEENIN.
Ma DP WORLD baa mise waa P&O PORTS, sida boodhka idinka muuqata mahaa DP WORLD waa Sub station yaroo hoos tagta DP WORLD,
DP WORLD BAA YAABTAY😂😂😂
Ma gudbe ayaa tahay, kkkkkkkk
DP World waa shirkad weyn oo maarkiib&dekedo leh.
Qaybta dekedaha aya P&O ports la yiradaa!
Berbera marka lagu wareejinayo intaas ku qornaan!
Tiina waxaa daahiyey saldhig millitary ayaa la socday dowladda Somalia waa diiday in saxiixdo:
Dekedda inla maalgashado waa la ogolyahay laakiin ciidan waa sheeko qaran.
Ma dowlad gooni ah ayaad ismoodeen!!
Waa idinkaas reer Puntland maalinta dekeda la idiin dhiso waa badeecada gaarta ilaa central Africa.
Jidkii Ceel Dahir ceeligaabo waa gabagabo.
Boosaaso Kalkacyo jidkii Burtinle kusoo dhowyahay.
Garoowe international Airport bisha januari la furin..
biyo xirreno 6 xabo. 3 la dhameeyey!
Warshada Kaluunka qaboojisa Caluula waa la furin december.
Galkacyo Airport iyo Hospital Chinese kontarkt ku qaatay
Gaajo lee yaan maqlin mar dhow, reer Dhul-Udug waa u samreen in amni iyo horumar helaan. Its time nabadda miraheeda gurtaan.
Ha dhismeen gobolada dhan.
Horta maxaa Puntland keliya horumar uga socdaa? yaa hortaagan gobolada kale!
Arrinkaan dakadda Boosaaso uu kasameeyay hogaamiyaha Garoowe, Abdiwali Gaas, waa dhaawac loogu darray caay Madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare kheeyre.
Hadal been ah, iyo facebook iyo twitter kama shaqeeyso siyaasadda qasan ee hogaaminta dalka Somaliya, ee qaladaadkii eey galeen Madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare Kheeyre hasaxaan. Hadii kale, ninkaan kursiga Villa go’doonka galiyay ee Abdiwali Gaas majoojinaya weerarka siyaasadeed ee uu ku haya ninkaan uu doonaya in uu xukunka karido.
Madaxweeyne Farmaajo dhowr tilaabo oo qaldan ayuu qaaday, cadeeyna waxaa u ah, waa kan hadeer eey u midoobeen Wiil Hiraab yo Land of Punt, halka ninkii ka caqli iyo khibrad badnaa, Madaxweeynahii hore ee dalka Madaxweeyne Hassan Shiiq, uu labadaan nin iyo reerahooda uu iyaga isku mashquulin jirray.
Qabiilada eey daacaad katahay Somalinimada ma in eey u gurmadaanbaa Madaxweeyne Farmaajo, mise, waa ini eey dhahaan meesha aad ku qooysatay ku qalalso? Waan ogahay reero badan oo Somaliyeed oo dhiigooda wadaninimo badan yahay ayaa jira, just like, sida eey u jiraan dad dowlad diid iyo kacaan diid eey isku mid u yahiin?
Xaangow ma’ila socotaa?
Anaa kula socda Xaange hadda qadka waa ka maqan yahay! waxaa aan horumar kor ku qoray iyo kuwo kale oo badan haddii Xamar waxwalba geyno ma heli lahayn.
Aniga intaas iyo ka badan ayaan gobol walba oo Somaliyeed la rabaa= in dadka nolol iyo horumar loo sameeyo oo weligeen waa reer hebel mijaha isugu dhegenaan.
Viva Dhul Udug😎🤑
Sxb bal Bossaso tag in lagaa xigo!
Xitaa wiilal Eelaay ah yaa saliga Boliska weerara waayo hadaad Somali tahay cidi ma oga meelna timid!
Waxaad u hadlaysaa in horumarka Bossaso cid gooni ah leedahay!😆
Maamulka Puntland u taliya laakin ninwalba wax haysto ama ka dhisto leeyahay!
Xamar iyo Bossaso waa 1600 km, ma Farmaano ayaa nolol la gaara hadaan ayaga waxqabsan
Mise sidii awowgey oo oran ” Dhulkaas waa gaari waa” dib in ugu noqono rabtaa?
Waxaad isu heeystaa in aad saxantahay, laakkin, adiga iyo hogaamiyahaaa Mr. Gaas waad qaldantahiin.
Aduunka waxuu noqonayaa a global village, adinkana waxaad dooneeysaa in aad Somaliya darbiyo qabiilo u kala sameeysaan. Jidkaan aad sheegeeyso, badeecada lamarsiinayo, hadii uu qabiil hebel, oo dowlad federal hebel leh, diido, maxaa la sameeyn?
War ninyahow, waad lunsantahay walaahi, when it comes long term strategy.
Waad dhici kartaa tactical win, guul caato ah, in aad ka gaarteen qabiilada agoonta kacaanka, sababta aad uga guuleeysateena waxeey tahay, waxa aad dooneeysaan ayaad ogtahiin oo ah maamul qabiil, halka agoonta kacaanka eey wax kasta iskaga qasanyahiin. Waxa eey rabaan iyo waxa eeysan rabbin, xataa waxa iskaga qasan dhalashada qabiilada eey sheegtaan.
Laakiin, one day, maalin uun, ayaad adiga oo duq ah, amaba dhintay eey caruurtaada ogaan doonaan, waxaan aad la ordeeysaan ee qabiilka, kaliya in uu shaqeeyn doona, ilaa eey dadka kale wareersanyahiin.
Boosaaso ma u tartami karaa qof kasta oo Somali ah in uu gudoomiya ka noqda? Waxa uu u weerarayo cunung Eelaay ah Boosaaso waa maxay?
Waa iska copycat Somaliland ee maxaa ka dhoofi Tuuladaan yar ee Jufada Yar degantahey.
MJ markaan badiyo waa half Wacb
MJ markaan badiyo waa Half Wacbuudhan, xoolahana waxaa u ah Qubo iyo Riyaha Garowe.
May be wali waxey rajo ka qabaan iney Daarood shaaha ugu kariyaan Garowe, waa rag
Ahaha, Anaku maanaan arag meel ay P&O ku qorantahay markii dekeda Berbera la wareejinayaay, laakiin bosaso ayuun baan ku aragnay P&O dan walahay, ahahaha, Video gii Utube ka ayuu ku jiraa daalaco hadaad doonto, ahahaha, waxani mahaa DP WORLD ee iska jira waa shufto P&O la baxdayee
shikadihii utar tamay dakada barbara ayay kamid ahayd P&O ee loodiiday waxaana sitoosa ulawareegtay DP World MARKAA YAAN WAX LAYSKU QALDIN
Qolyihiinan qabiilaystayaasha ah ee SNM iyo SSDF SU’aal aan idin waydiiyo idinkoo raaliya please aawey balanqaadkii DPW ee Berbera? Inta aan la gaadhin B/saaso!!
Mase dhegaysateen reportkii laga sameeyey Dekeda B/bera?
Adeer carabtu waxay tiraahdaa ((Man sharafanafsuhu fahuwa shariif)) nin aan isagu is qiimayn cidkale sharaf uma hayso, waana ogahay oo dhamaantiin waxaad hoosta kuwadataan passporo dodyow kale leeyihiin kiiniina qabiil ayaad ka doorateen.
hAYAAN SXB isqabooji intaadan su,aal nawaydiinin way bilaabantay waanay socotaa dhawaana indhahaagaad ku arki miyaad kudhuusi markaa xaasid yahow indhaha buurani
Hayaan adigu yaad tahay ma dhul. mahante bal iscadee horta
Adigu hadaadaan ahayn qoloyinkaas aad soo sheegtay ee SNM & SSDF ma waxaad tahay qoladiii aanu KASTUUUMADA ka siibnay?
Waar qolodii aanu kastuumanda kasiibnay sxb kan hayaan wataa, inu wali orodkii iyo hayaankii cali bile ku jiro wali miyaadan arkayn.
Allaa mahad iska leh. Ninkii dadaalaa waa gaaraa. Waxaan jeclaan lahaa in horumarkaas puntland ka hanaqaaday mid la Mida uu ka jiro dhammaan deegaanada soomaaliyeed. Dadkayaga u ololeeya federaalka, waxaanu rabnaa in deegaan walba oo soomaaliya ah in horumarka laga dhadhamiyo. That is the vision, and that is the dream. Wey noo shaqaynaysaa, maxaa yeelay kuwa fikradayada kasoo horjeedaa, waan ognahay indha caddayn mooyee, inaysan wax aragtiya hayn. Tii unitary/centralized ka ahydna waa tan dhibka ba ka dambeysey oo ku noqosho ma leh. Puntland mirihii dadaalkii ay soo gashay bay guranaysaa waxay leedahay:
“All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me…. You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you”. Iska kaaya tuuryeeya, waxaan ka qaadaynaa, bisayl, adkaysi, wadaninimo, iyo soomaali jecel. Nasan mayno ilaa meel walba iyo deegaan walba mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa isagu maamusho. Indhahaa macallina in federaalku shaqaynayo, horumarka puntland muddo yar ku tallaansatay, waa markhaati ma doonto, ninna yaanu kaaga sheekayn.
Orod badane ma baxsatay durba inagoon waxbaba is odhon ? Fullaynimada waan kugu ogaa.
Caqli hadii aad leedahay waad ku farxi lahayd dhismaha dekedda Boosaaso waayo waa mida aad wax walba kala soo degtaan oo ay ku xiran yihiin reer tolkaa iyo magaalada magaceeda aad wadato ee cadado ilaa Baladweyn.
Waad ogtahay xitaa raashinka UN ama Turki uugu deeqo soomaaliyaa ee u socda ilaa Baladweyne xitaa Xamar hadii uu yaalo waxaa loo raraa Boosaaso oo halkaa ayaa ilaa Baladweyne looga soo daabulaa waayo Jidka Muqidsho iyo ilaa Cadaado u dhexeeya raashin lama marsiin karo oo il iyo aragti baa ka dhexeeyoa mooryaanta isbaaradu u taal jidkaa dheer.
Xaangow, ima aad fahamsanid. War anniga horumarka Boosaaso amaba magaalo kale oo Somaliyeed waan taageersanahay, as long as, magaaladaas eeysan dadka dagan, amaba ka ganacsada eeysan lid ku aheeyn dowladda dhexe ee Somaliya. yes, ha’is maamulaan si cadaalad ah, oo Eelaayga jooga, iyo Hawiya iyo Daarood iyo Dirta joogta si xor ah, oo dimuqraadi ah oo aan qabiil aheeyn ha’isku maamulaan.
Total khiyaano Qaran oo loogu gabbanayo horumar sheeko xariir ah.
Imagine American state like California oo doonaysa inay horumariso Long beach port iyada oo aanan Washington soo marin.
Imagine wixii dhici lahaa….
Adeer qarankii Soomaaliyeed cad cad baa loo jarahayaa.
Farmaajo iyo khayrana waa geddoodii iyo aamuusnaan
Down all Imaaraat puppets
Hadaa waanu is fahaney soomaaliya walaahi waxaan jeclahay meel walba inay wad dakad iyo laami noqoto oo umadu meeshay doonaan maraa si nabad ah.
Xaange, Annigana sidaas oo kale ayaan jeclaan lahaa, walaahi, in eey Somalida iyo dalka Somaliyaba uu duulo, taana ma dhaceeyso ilaaa aan xoojino dowlad dhexe, oo naga dhaxeeysa, gobolada iyo degmooyinkana dadka dagan loo ogolaado in eey is maamulaan, is doortaan iyo arrimahooda hoose. Laakiin, absolutely, looga dambeeya arrimaha caalamiga ah, iyo xiriirka caalamiga ah, difaaca dalka iyo waxyaabaha kale qaarkood dowladda dhexe.
Ma’ahan, nimanka gobolada iyo qabiilada hogaamiya in eey wiiqaan dowladda dhexe.
1. Bossaso cidwalba oo Somali ah ayaa degi karta dhulna ka dhisan karta.
Maamulkeeda waxaa leh dadka dega, aniga hadaan Cadaado rabo inaad dego waa ku fekerin laakiin taladeeda kii ku dhashay ayaa iga leh laakiin degi maysid baa qalad ah, haddi dadka dega i doortaan waa okay. Dadka Bossaso hadday ku doortaan waa okay! Laakiin mid u naxayn in qasab loogu soo magacaabo weeye wax la diidan yahay.
2. Wiilasha Eelay waa argagixiso dadkii degaankooda kusoo dhaweeyey qarxinaya, waa kuwa qarxiya Noiriobi, Kismaayo, Xamar, Galkacyo ilaa Bossaso. Cid bay u shaqeeyaan Somalia in degto rabin, cidna ma qarxiyeen haddii Bossaso loo ogolaan.
Inta madaxa madow macal idaha lagu daray iyo Majeerteen ayaa is le’eg ayaan maqli jiray! Kkkkkkk Weligey Wacbudhan qurbaha ka hor ma maqal, xagay jiri jireen dagaalada ka hor?
Hiraab iyo Daatood waa maqli jiray, sidoo kale Dir iyo Daarood.
Wacbudhan wax jira maaha kuma lihi laakiin lama sheegsheegi malaha waa laga faani jiray!
Alxaasid maaya aflax.
Viva the Land of Punt aka dhul Udug.
Heshiiskii Gaasbsoo galay Dubai wuxuu la sixiiday DP world, oo ah shirkado, Maraakiibta, hotels, land management, ports ama dekado.
Kuwaan Bossaso la wareegay waa kuwii dekeda kiraystay oo dhisaya.
Aqli yaridaa, ma waxaad is leedahay Berbera kor u qaad oo Bossaso dhig.
Ma taqaan inta Bossaso Khalijka u jirto iyo inta Berbera u jirto.kkkkkkkkk
daanyeer caqli yar in aad tahay waan ogaa, xataa hadii aad naag ajnabi ah guursatay oo lamacaamishay, you are still ignorant, badow ayaad tahay.
Waryaa, ma ogtahay in qofka hadii uu muwaadin dal yahay, uu magaalada iyo gobolka uu doona xaq u leeyahay in uu ka codeeyo, isagana hadii uu is sharaxo loo codeeyn karro. Daanyeer caqli laawe ah in aad adiga iyo adeerkaa Cabdiwali Gaas tahiin, waxaad wadaa in dadka qaarna eey xaq u leeyahiin in eey u codeeyaan, qaarna eeysan xaq u laheeyn. Yacni voting right, oo ah xaquuq aasaasi ah, ayaad leedahay, qabiil hebel kaliya ayaa meel hebel ka codeeyn karra. You are fucking dumb, walaahi baan ku dhaartee, eber ayaad tahay, hadii aad sidaas u fakireeysid, ethnic federal ka, eey Ethopia ku dhaqanto xataa sidaas ma’ahan.
War ninyahow waad ka dhacsantahay arrinkaan. yes, waan kuu garaabi, in Somalida kale eey daanyeero adinka idinka sii liito eey u badan yahiin, maadaama eey wax “alternative” ka duwan waxaan aad la’ordeeysaan eey keeni waayeen, amaba xataa wax u dhigma.
Dagid aan meel daggo maxeey ii sheegi? Makulatahay in eey umad caqli leh, ku qanceeyso meeshaan waad dagnaan kartaa laakiin, xaquuq kuma lahid?
Su’aasha labaadna waad ku dhacday, wiilka Eelaayga waxuu Boosaaso u qarxinayaan arrimo/sababbo badan, hal sabab oo kamid ahna waa caqli daanyeernimadaas aad ku hadashay, aad aaminsantay. Wax kale yeelkadeede, anniga ayaa ku taageersan wiilka Eelaayga in uusan Boosaaso ugu noolaan nus muwaadin, amaba muwaadinimo qabyo ah.
Masse fahmi kartid, land of punt, waxaan aad waqtiga badan galiseen adinka oo reer ah, in eeysan walaahi shaqeyen doonin over the long term. Sababtoo ah, this day and age, lama jaan qaadi kartiin hadii aad si badow ah oo qabiil ah fakireeysaan, xataa kuwiinii professors bug ah, oo been ah sheeganaya.
Dp world waxay ku kala baxdaa qayb Dubai world port iyo P&O oo ka gaten UK, waa ku dhisay Pensylvania port etc. 50 ports worldwide, including Singapore.
Waa runtaa Berbera waa dhisaynaa kuwa Carabta Dubai Port, Bossaso P&O. London and Newyork head Office ku leh.
Hadda ayaan si fiican u aqriyey waxay kala yihiin!
Laakiin waa same.
Waxaaa leh faaiidada kasoo baxda, the goverment of Dubai, maaha private waa hanti qaran reer Dubai.
Waxaan moodi jiray shirkad private ah.
New York markii lagu wareejinayey waa la isku qabsaday, dhinaca securitiga, congresska qaar ku doodeen waxay wadanka Carabtaan soo gelinayaan ma ogaan karno marka dekedda gataan, sidee ku aamini karnaa?
Compromise la gaaray.
Bossaso iyo Berbera maxay ka dhacayaan oo yaal? Anaga u baahan in dhulka cid noo maalgelisa.
Waa in lasoo dhaweeyaa cidda wadanka maal gashanaysa oo dad shaqo u abuuri kara!
Aduunka “investment attractive” waa lagu tartama!
Sida waxaan haystaa shaqaale jaban oo aqoon leh! dekedo iyo airports aad waxaa ka degsato ama dhoofsano etc. ayaa hayaa ee anaga na maalgashada! Taas China ayaa ku taajiray!
Taxadar waa muhiin aad ogtahay heshiiska gelayso danta kuugu jirta laakiin investment (Maalgashi) in aad hesho si bulshada quality life u helaan iyana waa muhiim.
Maryooley ma i fahamteen!🖐
Waxaan qoray maad aqrin! Ku noqo.
Hadalkayga waxaa ka mid ahaa: Dadka Bossaso hadday ku doortaan waa okay! Laakiin mid u naxayn in qasab loogu soo magacaabo weeye wax la diidan yahay.
Ma hubsade ayaa tahay! Anoo soo taagan iga been sheegaya! Xagee ku qoray qabiil hebel keliya waxdooran!
Intaan qoran sow kuma cadayn haday reer Cadaado i doortaan waa okay! Adigana reer Bossaso ku doortaan, in qasab ku xukunto weeye doodu.
Waa kan warkaygiii
“aniga hadaan Cadaado rabo inaad dego waa ku fekerin laakiin taladeeda kii ku dhashay ayaa iga leh laakiin degi maysid baa qalad ah, haddi dadka dega i doortaan waa okay. Dadka Bossaso hadday ku doortaan waa okay! Laakiin mid u naxayn in qasab loogu soo magacaabo weeye wax la diidan yahay”
🙉 Daanyeer baa yaabay🙊
Sweden old democracy ah, doorashada degmada waa inaan ka register garaysanay oo adress ii tahay in degmadaas ka codeeyo.
Ajnabiga waa in 3 sano degenaa in degmada cod ku yeesho.
National elections ama doorashada qaranka guud qofkasta hal cod leeyahay, meesha markaas safar ama degaan ku joogto ka codayn, hadaad xitaa dalxiis ku maqnayd safaradaada ka codayn, ayaga soo dirin codkaaga!
Xilliga doorashada waxaan ku jiraa dadka ka shaqeeya doorashada oo saxa qalad hadii daco! Been kuu sheegi maayo!
Marka iiga sheekayn maysid, si cod loo dhiibto iyo real democracy meesha xaq u leedahay in ka codayso.
Waxaaga waa ha jabtee geli! Degmada waa in daacad u tahay, ka qoran tahay! Haddii kale cadow talo u dhiiban oo meesha inuu gubo raba!
Waa Dabshid Bossaso u dooro! Raba meeshaba inuu xiro! Kkkkkkkkkk😅
Real democracy is a deeply commitment and loyalty to your county or your country.
Waa in ka tirsan tahay wadankaas ama degenahay degmadaas aan ka codaynayo!
Hadaan si kale kugu dhigo, wiil iyo aabihiis Swedish ah ayaa doorasha socoto, they call kummunal val (county elections) wiilkii doorasho ka gelayaa Gothenburg aabaahiis doorashada Gotherburg kama qayb geli karo waayo kama register garaysa wuxuu degen yahay Stockhom.
Waa wiil iyo aabihiis Swedish ah oo Sweden jooga!
In my books waa sax, waayo in degmada degentahay oo daacad u tahay oo horumarkeeda dan kuugu jirto ileen waad ku nooshaye waa muhiim.
Haddii kale waa London baa gubanaysa maxaa iiga gidiish ah! Maxaa kaaga qasaaraya meel ku noolayn.
Dulduleel lee raadinayaan federal diid.
Land of Punt, what? war ninyahow waad wareersantahay, ee ma waxaad is leedahay dad badow ah ayaad u sheekeeyn?
Haye, xataa hadii aan kuu raaco 3 daan sanno ee aad sheegtay ee Sweden looga dhaqmo, walow eey either amaba beentaa tahay, amaba Sweden laftigeeda wax ka qaldanyahiin [oo eey dambeeyaan, anniga meesha aan jooga, waa uun hal bil in aad dagantahay magaalada]
anyways, what is next? maxaa xiga, xataa hadii aan kuu raaca 3 sanno aad sheegeeyso, hadii uu Dabshid daganyahay Boosaaso xaq ma’u leeyahay in uu ka codeeyo, una tartamo in loo codeeya?
Mise, waxaa aad adiga iyo adeerkaa Abdiwali Gaas wadaan, waa sharciga qooto qooto, iyo sharciga keeymaha, oo aad jeebka kala soo baxeeysaan.
Democracy is supposed to be all inclusive.
Waxa aad wadaan adiga iyo Gaas’e waa qardo jeex.
maxaad ugu meereeysan wax aanba su’aal ka taagneeyn, sida register.
War waxaan ku dhahay, Dabshid Sadex sanno ayuu daganaa Boosaaso, waxuuna rabaa in uu is register gareeya? Sharciga daanyeerada ee adiga iyo Gaas wadataan maxuu ka leeyahay arrinkaan?
Dabshidow, barri maraad soo kacdo, raali ahow, waan ogahay in aadan u socon Boosaaso, iyo saxaradaheeda, laakiin, waa uun hypothetical, caqli xumadiisa in aan tusso xariifkaan land of punt 🙂
Dowladii kacaanka waqtigedii ayey dhacday in Galkacyo loosoo magacaabay mid Isaaq ah oo dadkii ka dhigay mid jaban iyo mid jiis, gabdhaha inta magaalada laga soo uririyo Xerada askarta la geynsan jiray! Run
Ninka la qabto asagoo habeen dibedda maraya toogasho.
Reerkii xalay gabdhaha ka kufsadeen inta subixii baabuur qaataan reer baadiyaha berkadaha sun ugu shubi jireen!
Hargeysa mid Majeerteen loo geeyey Morgan sidaa si le’eg, weliba Morgan nin humanity ku jirto ayuu ahaa, ogolayn shacab la dhiibo.
Rag baa raba in tii dib loogu noqdo.
Car Baraxley iisoo dhaafa,
Waxba kama aadan faa’iidan, excersice in democracy, jimicsiga demoqraadiya ee dadka Sweden isku dayeen in eey ku baraan, sababtoo ah, maskaxdaada weey fadhiisatay, oo waa finish, too late 🙂 Waadna iska dhex taagantahay meelaha lagu codeeyo ee aad tirri waan ka shaqeeyaa. Finish eber ayaad tahay.
Warka si fiican u aqri, 3 sano waa qaxootiga, ajnabiga xitaa sharci lahayn, 3 sano wax dooran.
Muwaadinka waa in ka diiwaan gashan yahay degmada keliya!
wax laga cabsado waxaa kajirra Ilaaheey oo kaliya, subxaanahu watacaalaa.
Waxaa kaloo laga hayaa madaxweeynahii Mareeykanka FDR, in uu dhahay wax aan ka cabsanno oo aan aheeyn cabsida kaliya majirto. Marka, adiga, cabsidii ayaad ka cabsan.
Baraxleey ayaad sheegi, Boosaaso ayaa lagugu imaan maalin, aan sidaas u sii fogeeyn. Darbiga China xataa hadii aad dhisto, taariiqda meesha eey u socoto kama celin kartid. Cabsida iska daa, ninyahow. Beenta aad isku sheegtaana iska daaya.
Cidina ma dooneeysa, kolayba anniga in Majeerteen la dhibo, laakiin, at the same time, ma’aan ogolaan karro iska dhaaf Majeerteen’e, Saleebaan in uu ku dhaqmo daanyeernimo.
The problem ka idin heeysta adinkase, waa isla saxantahiin, naar iyo cadaab tii lagalayana, waad ku mideeysantahiin si qabiil ah. Mudadda gaaban ee waqtiga adag lagu jirra laga yaabaa qaar idinka mid ah in eey ka faa’iidaan arrinkaas qabyaalada, laakiin, over the long term, Somali oo dhan, oo eey ku jirraan Majeerteenka ayeey qatar ku tahay waxa aad sameeyneeysaan maantay, horayna muddo ugu soo dhaqmeeyseen.
Dabcan qabiilada kale ee Somaliyeed iyaguba, dhaqanno fool xun, iyo ciladdo weey leeyahiin, loo baahanyahay iyagana in eey joojiyaan.
Somalia kama jiro, registration! Rinji la goyn karin ayaa farta loo geliyaa si 2 jeer wax u dooran!
Marka adiga iyo Dabshid hadda doorasho ma jirto laakiin isla beri wax dooran, ileen Maryooley lama kala gartee.
Laakiin real democracy waa degmada degen tahay markaad doonto soo deg!
War intaas ka badan kuuma hayo oo federal diid ma qalcin karo, waayo nin meel u cadahay meel ka madow!
By the way Dabshid! He is not welcome to Bossaso, waayo waxba una quuro, Bossaso deeqa
Cafis waan shaqo tegey!
ok, waa fahmay, Sadex sanno waxa laga raba waa ajnabiga/qaxootiga, hadii uu muwaadin dhalasho qaatay. Ok, laakiin, qofka Swedish ka ah waxa kaliya oo laga raba in uu ka diiwaan gashanyahay magaalada.
So, hadii uu magaaladda Boosaaso iska diiwaan galiyay Dabshid, muwaadin Somaliyeedna yahay ma codeeyn karaa marka loo fiiriya sharciga bugta ah ee aad adiga iyo adeer Gaas wadataan?
Haye, saaxiib, shaqo wanaagsan, land of punt,
PHD ayaa hasytaa USA weligay joogay maanta ayaa ciid ku shubtay! California markii Trump la doortay xitaa dal gooni ah noqonaynaan ku hanjabeen.
America iska dhaaf oo federal states ah Sweden oo aan federal ahayn ayaa Degmo Karlskona la yiraado heshiis deked uga kiraysano Company Ruush ah oo pipeline Gas Russia ka keeni lahaa Baltic sea badda hoosteeda maraya oo u socda Germany 250 million oo Lacagta Swedish ah. Ayaa dowladda Swedishka ka diiday.
Degmadi waxay ku doodayey in lacagtaas u baahan yihiin dowladda waxay ku doodfaysay national security, national defence darteed ma yeeli karno, Russian submarines ayaa kusoo gaban kara, maxkamadda sare la isla tegey oo degmaddii gar heshay, maantana dekedii Karlskona u kiraysan tahay Russian Company.
Yaad boor iskugu qarinaysaan, federal diidkiina.
Wadani iyo aqoonayn xaal qaata!
Dhamaan waan idin salamy.Rer Puntland guul guul horumarku wuu biloowday manshallah alle haynoo siyaadiyo,
Midbaan idin sheegayaa dekada boosaso hadey dhisanto waxey noqoneysa dekada kaliya e eeska africa iyo asia si rasmi iskugu xidha kuwo badan ayaana hawada kabaxaya sida djabuuti berbera xamar waxasi waxa hogaanka uqabaneysa bossaso wana waxa looga dabo qeylinayo balse umeynn joojin viva Puntland kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cadaado danyeer miyaa ninkaan maanta sida gobta wax uqorahaya mise waa mid cusub ? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
WALAAHAY WAXAA AYAAN DARO AH IN ETHIOPIA WAX LAGA SIIYO QANDARAASKA,85%ka IMARATKU LEEYAHAY ETHIOPIA WAXAY KU LEEDAHAY 19%,HALKA PUNTLAND LEEDAHAY 15%,
QAABKA LOO QAYBSADAY;-
WAR WAXAASOO KALE INTEE LAGU ARKAY,MADAXDA PL WAY QARINAYAAN KA XISHOONAYAAN INAY XAQIIQDAAS SHEEGAAAN.